Uller Ski - Ski, qoraxda iyo muraayadaha indhaha ee Freeriders
WAAN XIGASHO SPORT, WAA SPORT
Uller® waa summad isboorti isboorti oo ay abuurtay iyo kuwa ugu caansan ciyaaraha isboortiga. Waxqabadka farsamada sare si loo damaanad qaado waxqabadka ugu fiican iyo kalsoonida ugu badan ee xaaladaha ugu adag inta lagu jiro cayaaraha xirfadeed.
Barafkeena iyo muraayadaha barafka waxaa abuuray oo loogu talagalay freeriders. Waxqabadka farsamada sare si loo damaanad qaado waxqabadka ugu fiican iyo kalsoonida ugu badan ee xaaladaha ugu daran inta lagu jiro tababarka Freeride.
Qaab ka samaysan kuwa ugu fiican cellulose acetates. Waxaan si taxadar leh u xulannaa qayb kasta oo acetate ah si loo hubiyo in natiijada ay noqon doonto tan ugu fiican. Qaab kasta waxaa lagu farsameeyaa oo gebi ahaanba gacanta lagu farsameeyaa farsamo yaqaanada
Koofiyadaha Uller® waxaa abuuray oo loogu talagalay kuwa jecel cayaaraha. Iyada oo la adeegsanayo qaab cad oo qeexan, waxaan helnaa badeecad si fiican ula qabsaneysa dalabaadka ciyaartoy kasta.
Xorriyadda ka baxsan buurta ... Waxyoon iyo aqoon loogu talagalay xoreeyeyaasha dhabta ah!
Fuulitaanka buurta waa xorriyadda waa muujinta ugu badan! Maqaalkani waxaa loogu talagalay adiga kuwa jecel freeride jecel ee sanadkaan leh rabitaan ka badan sidii hore si ay u dareemaan adrenaline inay ku degdegaan xididdada. U fiirso talooyinka isboortiga ee buurta ... Nala hadal annaga!
Had iyo jeer waa inaan u qalabeynnaa sida ugu macquulsan. Ilaalinta aragtideena iyo indhaheena waa muhiim, halka ay tahay inaan la qabsano xaaladaha cimilada ee halkaas ka jira. Soo hel muraayadaha muraayadaha indhaha oo leh muraayadaha laysku beddeli karo!
TOP 10 fiidiyow oo ah faracyadii ugu xumaa Ha moogaan!
Kaliya ku habboon freeriders wadnaha! Dareemo dhamaan adrenaline, qiiro iyo madadaalo iyada oo loo marayo tan TOP 10 fiidiyowyada ah ee ugu hooseeya. Miyaad tabi doontaa iyaga? Laba jeer ha fikirin oo guji halkan! Nala wadaag noloshan aan la iloobi karin ee soo koobaya abid abtirsiinyadii iyo astaamaha ugu caansan taariikhda ...
Miyaad horeyba u ogeyd aruurintayada cusub ee maaskaro barafka "Derbiga"? Ha moogaan! In moodada isboortiga ee UllerNever marna kama dambayn. Kooxdayada nashqadeeyayaasha ah ee xiisaha u qaba freeride, isboortiga buuraha iyo tacaburka runta ah, waxay sii wadaan ka shaqeynta keenista isbeddellada ugu dambeeyay ee maaskaro barafka lagu ciyaaro
ULLER® UGU DAMBEEYA DHAQANKA TALOOYINKA CARRUURTA
Uller® Waa summad heer sare ah oo waxqabad sare leh oo ay abuureen isla markaana loogu talagalay ciyaartooy caan ah. Dhammaan alaabooyinkayagu waxaa lagu abuuray khibrad ay leeyihiin ciyaartoy waxqabad sare leh oo uur yeelanaya baahiyahooda alaabooyinkeenna kuwaasna waxaa loo abuuray inay buuxiyaan dhammaan dalabaadka. Wax soo saarka ayaa la tijaabiyaa iyaga oo u qaadaya heerka ugu sarreeya ee walbahaarka si loo hubiyo inay la kulmi doonaan waxyaabaha laga filayo inta lagu jiro isticmaalka xirfadda iyo hiwaayadda hiwaayadda hiwaayadda.